भरतपुरले मोड लिएको ती दिन ! – Click Khabar
२०७८, २६ असार शनिबार0
चितवन,२६ असार । उ बेलाको भरतपुर कस्तो थियो ? त्यो बेला स्थानीय तहले कसरी काम गर्थे ? बेलाबखत यी प्रश्नहरु उब्जिन्छन् । साविकका भरतपुर र नारायणगढ गाउँ पञ्चायत मिलाएर २०३५ सालमा भरतपुर नगर पञ्चायत बन्यो । बहुदल आएपछि २०४८ मा भरतपुर नगरपालिकामा रुपान्तरण भयो । १४ वडामा विस्तार गरियो । पछि ५ गाविस गाभिएर २०७१ कार्तिक मा उपमहानगरपालिका बन्यो । २०७३ मा नारायणी, चित्रवन नगरपालिका र कविलास गाविस गाभेर महानगर बन्यो । भरतपुर महानगरका ती पुराना दिनलाई आज हामिले खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ ।
बहुदल पछिको भरतपुरको पहिलो उपमेयरका रुपमा जगन्नाथ पौडेल चुनिए । २०४९ सालमा चुनिएका पौडेलले देशैभरीको सर्वोत्कृष्ट नगरपालिकाका रुपमा पुरस्कृत गराउन भूमिका खेले । इन्टरनेशनल भिजिटर्स प्रोग्राम (आइभीपी) अन्र्तगत अमेरिकामा तत्कालिन उपमेयर पौडेलले सांसद स्तरको सम्मान पाएका थिए । “प्रस्तुती, कार्यसम्पादन देखेरै सर्वोत्कृष्ट नगरपालिका भनेर चिनियो”, उनी भन्छन्, “त्यही बेलादेखिनै भरतपुर राज्यको चासोको केन्द्रमा पर्न थाल्यो ।” २०४९ सालमा करिब ५ हजार मत ल्याएर कांग्रेसका तर्फबाट उपमेयरमा विजयी बनेका थिए । मेयर मुक्तिलाल चुके थिए ।
नारायणगढ बजारको बाटो फराकिलो पार्ने अभियानमा लाग्दा मुद्धानै झेल्नुपयो । करिब ५० मिटर फराकिलो बाटो लायन्सचोकदेखि पुलचोकसम्म मिचिएर ५–६ मिटरमा खुम्चिएको थियो । “टहरा भत्काउन डोजरमै चढेर गएँ, बाटो फराकिलो पार्नुपर्छ भनेर लाग्दै उल्टै मुद्धा प¥यो”, उनी सम्झन्छन्, “पछि मुद्धा खारेज भयो, बाटो चौडा पनि बन्यो ।” उनकै पालामा केन्द्रीय बस ट्रमिनलका लागि ३ विघा जग्गा साझाबाट नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउने काम भयो । “सडक छेउछाउमै बस पार्कीङ हुन्थे, बजारनै अस्तव्यस्त थियो”, विगतको नारायणगढ सम्झदै उनि भन्छन्, “व्यवस्थित बनाउन त्यही बेला छुट्टाएको जग्गामा अहिले राम्रो बसपार्क बनेको छ ।” नारायणगढ बजारमा सार्वजनिक सवारी पार्कीङ गर्न नपाउने गरी तत्कालिन समयमा सूचना जारी गरिएको सम्झदै उनी भन्छन्, “बसहरु बसपार्कमै रोकिनुपर्दथ्यो वा रामनगरमै, त्यसपछिनै रामनगरमा शहरीकरण सुरु भयो ।”
नेचर गाईडको माग कोभिड खोप
१ अंकले घटेको बजारमा अहिलेम्मकै सार्वाधिक कारोबार
चितवनमा एक दिने वालक सहित ६८ जना कोरोना संक्रमित थपिए